मङ्गलबार, ०६ बैशाख, २०७९, राष्ट्रिय डेली
पासङ शेर्पा (अंग)
सल्लाहकार, नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनइएससी)
पासङ शेर्पा (अंग) नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनइएससी)को सल्लाहकार हुनुहुन्छ । युरोपमा बस्ने नेपालीबीच भाइचारा अभिवृद्धि र स्वास्थ्य जीवनका लागि सचेतना जगाउने उद्देश्यले संघ स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ । खेलकुदले मान्छेका मन र मुटुलाई जोड्ने शेर्पाको भनाइ छ । विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अष्ट्रियाको तिरोलमा पर्यटन व्यवसाय गरेर बस्नुहुने सल्लाहकार शेर्पा संघको साधारणसभा गरेर छिट्टै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताउनुहुन्छ । संघले खेलकुदसँगै नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको समेत प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनु हुने सल्लाहकार शेर्पासँग संघले गरिरहेको कार्यलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनइएससी) अहिले के गर्दैछ ?
आदरणीय दाइ दिलकुमार घमालको नेतृत्वमा हामीले यो संघलाई गठन गरेका थियौं । संघलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन उहाँको धेरै नै ठूलो योगदान छ । अब हामी छिट्टै नै संघको साधारणसभा गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछौं । त्यसका लागि हामीले युरोपभरि रहनु भएका खेलप्रेमीलाई संघमा आबद्ध गराउने कोसिस गर्नेछौं । खेलकुदले राजनीतिले विभाजित भएको मन र मुटुलाई जोड्छ । खेल भनेको यस्तो क्षेत्र रहेछ जहाँ देशको कुनै सीमित हुँदैन, न त धनी, न त गरिब, न त धर्म, जात केहीको बन्देज हुँदैन । त्यसो भएकाले पनि यो पवित्र संस्थामार्फत हामीले युरोपमा रहेका नेपालीलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न किन आवश्यक पर्यो ?
कुनै पनि संस्थालाई चलायमान र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न त्यसको साधारणसभा गर्नुपर्छ । अब हामी छिट्टै नै साधारणसभा गरेर नयाँ समिति बनाउँछौं । अहिलेसम्म संघले गरेका कार्यहरु साधारणसभामार्फत हामी सबैलाई जानकारी गराउनेछौं । नयाँ कार्यसमितिमा नयाँ र पुराना सबैलाई समेटेर चुस्त र दुरुस्त बनाउँछौं । जसले वास्तवमै यो संघलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई समेट्छौं । यो संस्थामा राजनीति हुँदैन । हामी विशुद्ध खेलका मात्रै अझ भलिबल खेलको मात्रै कुरा गर्छौं । त्यसमै काम गर्छौं । अघि पनि मैले पनि राजनीतिले मान्छेका मन र मुटुलाई टुक्रा–टुक्रा पार्छ । तर, खेल क्षेत्रले टुक्रिएका मन र मुटुलाई पनि जोड्छ । यो त तपाईंहरुले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ ।
तपाईंहरुले भलिबल प्रतियोगिता पनि गर्नुभयो, कस्तो भयो नि ?
हामीले भलिबल प्रतियोगिता गयौं। तर, केही व्यक्तिका कारण हामीले सोचेजस्तो हुन सकेन । तर अब छिट्टै नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर भव्य र सभ्य रुपमा प्रतियोगिता गर्छौैं । यो प्रतियोगितामा युरोपमा रहेका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपाली खेलाडी साथीहरुलाई सहभागी गराउने छौं ।
पहिलो प्रतियोगिता गर्दाका अनुभव कस्तो रह्यो ?
स्वभाविक रुपमा पहिलोपटक प्रतियोगिता गरेका कारण केही हामीबाट कमीकमजोर पक्कै भयो होला । त्यसलाई आगामी प्रतियोगितामा सुधार गर्नेछौं । हामी पनि मान्छे हौं, काम गर्दै जाँदा केही सानातिना कमजोरी भइहाल्छन् । तर, यो प्रतियोगिता गर्न धेरैको साथ र सहयोग पाएका थियौं । जस्तो कि पासाङ शेर्पा, सुनिल सुनार, खेम विक, देवता घमाल, राजु विक, देवी घमाल, लेवोन घमाल, रमेश थापा, प्रेम रसेइली, रुद्रा विक, अशोक गौतम, राम विश्वकर्मा, आन्जी एबेर्ल, विकास कार्की, मोमोनेस, शिवा खड्का, किरण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मगर, सुरेश क्षेत्री, दीपक क्षेत्री, दिलीप बारतौला, रुदी बाउर, रिन्जी लामा, प्रभातमान शेरचन र दबिन गुरुङको साथ र सहयोगलाई भुल्नै सकिँदैन । उहाँहरु सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै कारण हामीले प्रतियोगिता गर्न सक्यौं । आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा राखेका छौं ।
खेलकुद मात्रै हो कि अन्य पनि उद्देश्य छन् संघका ?
नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनइएससी)को सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य भनेको भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्यप्रति आमनागरिकलाई सचेतना जगाउने हो । अहिले भाइचारा हराउँदै गएको छ । एउटा नेपालीसँग अर्को नेपाली नबोल्ने अवस्था छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै नेपालीलाई खेलकुदका माध्यमबाट एउटै सूत्रमा जोड्ने हो । अझ भनौं संघ एउटा धागो हो यो धागोले खेलकुदको सियोले नेपाली रुपी फूललाई जोडेर एउटै माला बनाउने हो । हाम्रो यो अभियान पनि हो ।
अबको प्रतियोगिता कहिले गर्दै हुनुहुन्छ ?
संघ स्थापना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै हो । अब छिट्टै नयाँ कार्यसमिति बनाउँछौं । समितिमा बस्न चाहने महानुभावले सम्पर्क गर्न पनि म अपिल गर्दछु । पहिला नयाँ कार्यसमिति गठन गर्छौैं अनि प्रतियोगिता गर्छौैं । यसपटक तिरोलमा भव्यताका साथ प्रतियोगिता गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । यहाँसम्म हाम्रो योजनालाई सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग पाउनेछौं भन्ने आशा लिएका छौं ।